हत्याको आठ महिनापछि अभियुक्त सार्वजनिक
गुल्मी : गुल्मीकाे इस्मा गाउँपालिका- १, छिनुवाखाेलामा भएको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
इस्मा गाउँपालिका छिनुवामा हाेटल संचालन गरेर बस्ने २३ वर्षका माेति बहादुर कुँवरकाे हत्यामा संलग्न इस्मा गाउँपालिका १ कै सन्तोष कुमाल, रमेश कुमाल र सुशील कुमाललाई हत्याको आराेपमा पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । यीनीहरुमध्ये मुख्य अभियुक्त रमेश हुन् भने अरु दुई सहायक मानिएका छन् ।
उनीहरुले प्रहरीसँगकाे बयानमा हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए । उनीहरुलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कुँवरलाई गत भाद्र २१ गते राति कुटपिट गरिएको थियो । अर्को बिहान उनको मृत्यु भएको थियो । तिजमा मेला हेर्न जाँदा युवती जिस्काउँदाकाे रिसका कारण याे घटना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
तुलसीपुरमा पार्किङ गरिएको कारमा तीन बालकको शव फेला
दाङ : दाङको तुलसीपुरमा तीन बालक मृत फेला परेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ६ स्याउली बजारमा रोकिराखिएको भारतीय जे ०१६६०८८५ नम्बरको कारमा तीन बालक मृत फेला परेका हुन् ।
उनीहरुलाई शनिबार राति फेला पारिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले बताए ।
बालक मृत फेला परेको कार लामो समयदेखि त्यस स्थानमा पार्किङमा राखिएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीका अनुसार सोही स्थानमा अर्को गाडी पार्किङ गर्न राख्ने क्रममा शव गन्हाएको थाहा पाएपछि हेर्दा मृत बालक रहेको पाइएको हो ।
रुकुम पश्चिम : जाजरकोटमा हत्या गरेकाे आरोपमा २ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्लाको छेडागाड नगरपालिकाका एक पुरुषको हत्यागरि झोलुङ्गे पुल नजिकै शव भेटिएको र अनुसन्धान पछि हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउ पर्नेहरुमा शिवालय १ बालुवा घर भई छेडागाड ९ राजिकोट बस्ने सुकिलाल वादी र उनका छोरा ज्ञानु बादी रहेका छन् ।
छेडागाड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ भैसीखर्कमा पर्ने फुम्न राजीकोट जोड्ने झोलुङ्गे पुल माथि छेडागाड नगरपालिका १० खलटाकुराका ४६ वर्षका धनविरे पुनमगरको शव आइतबार फेला परेको थियो ।
घटनाको तिव्र अनुसन्धान पछि हत्यामा संग्लग वादीका बाबुछोरालाई पक्राउ गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ।
आरोपितलाई अनुसन्धानका लागि अदालतले सात दिनको म्याद दिएको छ । उनिहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पथरी शनिश्चरेमा खुकुरी प्रहार, दुई जना पक्राउ
देवेन्द्र आलोक/ मध्यान्ह
विराटनगर : मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा २ जना पक्राउ परेका छन् ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–८ मिलन चोक बस्ने २२ वर्षीय कृष्ण मगरलाई धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–६ बस्ने २२ वर्षीय निरोज गोदी र सोही ठाउँ बस्ने १९ वर्षीय धिराज गोदीलाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पुरानो रिसइविका कारण उनीहरुले कृष्णलाई राम जानकी मन्दिर छेउमा खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ अस्थायी प्रहरी चौकी हसन्दहबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
घाइते कृष्णको नोबेल अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ । घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मोरङको केराबारीमा बन्दुकले हानेर साथीको हत्या
बिराटनगर : मोरङको केराबारीमा मृगभन्दै भरुवा बन्दुकले हानेर साथीको हत्या गरिएको खुलेको छ । सिकार खेल्ने क्रममा मृगलाई हानेको भरुवा बन्दुकको छर्राले लागेर मोरङको केराबारी गाउँपालिका–३ का ३२ वर्षीय हस्त राईको ज्यान गएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सिकार खेल्नलाई सँगै गएका साथीमध्ये ३७ वर्षीय गजेन्द्र राईले मृगलाई भनेर बन्दुक प्रहार गरे पनि त्यसको छर्राले लाग्दा हस्तको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो ।
हस्त र गजेन्द्रसँग रातको समयमा बाँसघारी राष्ट्रिय वनमा वन्यजन्तुको सिकार खेल्न २६ वर्षीय रुविन लिम्बू पनि गएको खुलेको डीएसपी राईले बताए ।
बन्दुक पड्किएर बुधबार राति ९ बजेतिर हस्तको घटनास्थलमै मृत्यु भए पनि घटनाका बारेमा प्रहरीले भोलिपल्ट (बिहीबार) बिहान ९ः३० बजेतिर मात्रै जानकारी पाएको थियो । सिकार गर्ने क्रममा बन्दुक पड्किएर साथीको मृत्यु भएको भन्दै गजेन्द्र र रुविन आफै इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीमा पुगेपछि घटना १२ घण्टापछि मात्रै बाहिर आएको हो ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उनीहरुले त्यतिबेला हस्त आफैले बोकेको बन्दुक पड्किएर घटना भएको बताएका थिए । तर प्रहरीले घटनालाई शङ्कास्पद मानेर अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा गजेन्द्रले मृगलाई ताकेर हानेको बन्दुकको छर्राले दायाँ कुममा लागेर हस्तको मृत्यु भएको खुलेको डीएसपी राईले बताए ।
प्रहरीले घटनास्थलबाट एक नाल भरुवा बन्दुक पनि बरामद गरेको थियो । पक्राउ परेका दुवै जनाविरुद्ध प्रहरीले कर्तव्य ज्यान र हातहतियार खरखजना मुद्दा चलाउन म्याद थप गरेर घटनाका बारेमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवतीसहित धरानमा पक्राउ
विराटनगर : सुनसरी जिल्लाको भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादव धरानको एक होटलबाट युवतीसहित पक्राउ परेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले यादवलाई पक्राउ गरे पनि सुचना गोप्य राखिएको छ । इनरुवा घर भएकी युवती सँग अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
पक्राउ परेको यादव छुटाउन अहिले इनरुवाको एक होटलमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।
अध्यक्ष यादवलाई डुकु होटलबाट पक्राउ गरिएको हो । तर यादवको सरकारी गाडी भने भेटिएको छैन । उनले एक इनरुवाकै महिलालाई जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा होटल लगेर जवर्जस्ती करणी प्रयास गरेकोसमेत जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सुनको लोभ देखाएर तीन महिनासम्म युवती बन्धक
विराटनगर : सुनकाे लाेभ देखाएर तीन महिनायता बन्धक बनाइएकी विराटनगरकी एक युवतीकाे माेरङ प्रहरीले उद्धार गरेकाे छ ।
भारत लैजान खाेज्दै गर्दा विराटनगर महानगरपालिका–४ की २४ वर्षीया युवतीलाई प्रहरीले कञ्चनपुरबाट सकुशल उद्धार गरेकाे हाे । मोरङ प्रहरीका डीएसपी मञ्जिल मुकारुङ नेतृत्वको टोलीले उद्धार गरी युवतीलाई मङ्गलबारसाँझ विराटनगर ल्याएको हाे ।
प्रहरीका अनुसार घरपरिवारमा समेत सुन, चाँदीलगायतका बहुमूल्य धातुको लोभ देखाउँदै युवती लिएर गएका थिए । युवतीलाई विराटनगर महानगरपालिका–१९ का २५ वर्षीय दिनेश मण्डलले भारत लैजान खोजेका हुन् ।
मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काका अनुसार अभिभावकलाई नै प्रलोभनमा पार्दै मण्डलले युवतीलाई गत माघ १० गते विराटनगरबाट लिएर हिँडेका थिए ।
टुनामुना गरेर घरबाट सुन निकालिदिन्छु भन्दै युवती र उनका अभिभावकसँग भेट गर्न मण्डल माघ ८ गते घरमै पुगेका थिए ।
‘आफू धामीझाँक्रीको काम गर्ने बताएका मण्डलले टुनामुना गरेर घरबाट सुन निकालिदिन्छु भन्दै परिवारलाई नै प्रलोभनमा पारेको देखिन्छ,’ एसपी खड्काले भने, ‘आफैले सुन किनेर युवतीको घरमा पुगेपछि जमिनभित्रबाट निकालेको देखाएर झुक्याएका रहेछन् ।’
उनले विराटनगरकै एउटा सुनचाँदी पसलबाट ५० हजार रुपैयाँमा सुन किनेर लग्दै युवतीको घर परिषरमा जमिनमुनी गाडेको पुष्टि भएको खड्काको भनाइ छ । त्यसपछि उनले टुनामुना गर्नेभन्दै विभिन्न गतिविधी गरी त्यही सुन निकालेर देखाएकाले परिवारका सदस्य र आफन्त पनि विश्वासमा परेका थिए ।
अझै धेरै सुन, चाँदीलगायतका बहुमूल्य धातु निकाल्नलाई सातवटा खोलाको पानी बिहे नगरेको कन्या (युवती)ले जम्मा गरेर ल्याउँदै शुद्ध जलका रुपमा चढाउनुपर्ने बताएर थप विश्वासमा पार्दै मण्डलले युवतीलाई लिएर हिँडेको खड्काले बताए ।
‘बिहे नगरेकी युवतीबाट सातवटा खोलाको पानी ल्याएर शुद्ध जलका रुपमा चढाउँदा बहुमूल्य धातु धेरै निकालेर धनी बन्न सकिने सपना देखाएपछि अभिभावकले मण्डलले भनेअनुसार मानेको देखिन्छ,’ एसपी खड्काले भने, ‘घरबाट हिँडेकी छोरी र उनलाई लिएर गएका मण्डल नफर्किएपछि आफन्त प्रहरीको शरणमा आएका हुन् ।’
खोजतलासको माग राखेर अभिभावक र आफन्तले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले मण्डल र युवतीको खोजी थालेको थियो । भारत लगिएको आशंकामा प्रहरीले आवश्यक समन्वय गर्दै खोजतलासका लागि सहयोग गर्न भारतीय प्रहरीलाई पनि आग्रह गर्‍यो । लामो समयको अनुसन्धानपछि युवतीलाई सकुशल उद्धार गर्न प्रहरी सफल भएको हो ।
विराटनगर ल्याइएकी युवती भने मानसिक रुपमा विक्षिप्त अवस्थामा छिन् । उनी कसैलाई केही पनि कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले थप ‘काउन्सिलिङ’ गर्दै घटनाका बारेमा बुझ्ने र वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जानकारी खड्काले दिए ।
प्रहरीले मण्डललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीले खोजी गरिरहेको थाहा पाएपछि तीन महिनासम्म आफ्नो कब्जामा राखेर युवतीलाई उनले कञ्चनपुर हुँदै भारतको वनवासातिर पुर्‍याउन खोजेको पुष्टि भएको एसपी खड्काको भनाइ छ ।
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानबाट मण्डल र युवतीबीच त्यसअघि कुनै पनि सम्पर्क एवं सम्बन्ध स्थापित भएको देखिँदैन । परिवार र युवतीसँग पनि चिनजान नभएको पाइएको छ । त्यस कारण बेचबिखन एवं कुनै गलत नियत राखेर युवतीलाई भारत लगेकाे हुनसक्ने प्रहरीकाे दाबी छ ।
वीरगन्जबाट १९ किलाे गाँजासहित एक जना पक्राउ
वीरगञ्ज : पर्सा प्रहरीले नेपालबाट भारत तर्फ लैजादै गरेको प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजासहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । विशेष सुचनाको आधारमा प्रहरीले वीरगन्ज महानगरपालिकाको वडा नं. १५ बाइपास सडक खण्डबाट १९ किलो ग्राम गाँजासहित वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. १३ मुर्ली निवासी उमर अन्सारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
ना ३८ प ६२२६ नम्बरको मोटरसाईकलमा लोड गरी भारत तर्फ जानेक्रम्मा प्रहरीले अन्सारीलाई गाँजा सहित नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरिक्षण बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए ।
वीरगन्जबाट दक्षित तर्फ जाँदैगरेका अन्सारीलाई रोकी चेकजाँच गर्दा दूईवटा पोकामा रहेको उक्त परिमाणको गाँजा बरामद भएपछि आवस्यक अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए ।
बरामद भएको गाँजा, मोटरसाईकल र पक्राउपरेका व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा राखि लागु औषध कसुर मुद्दामा अनुसन्धान अगाड बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
६ लाख बढीको सामान नियन्त्रणमा
नवलपरासी : नवलपरासीमा करिब ६ लाख १४ हजार ८ सय ५ रुपयाँ मुल्य बराबरको अबैध सामान सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सोमवार शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २६ गण हेडक्वाटर पश्चिम नवलपरासीको मातहत सशस्त्र प्रहरीको मोबाईल गस्ती टोलीले बिशेष सुराकीको आधारमा सरावल गाउँपालिका वडा नं. १ बासामा भारतबाट अबैधरुपमा भन्सारी छली लुकाई छिपाई नेपालतर्फ ल्याउदै गरेको लत्ताकपडाहरु(थानको कपडा– ४० थान, सर्टको थान कपडा ३० थान, लेडिज टप्स ३८४ पिस, मेक्सि १५०पिस, कुर्ता सुरुवाल ३१ पिस, साडि ९ पिस) बरामद गरी आवश्यक कारवाहिको लागी महेशपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाईएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २६ गण हेडक्वाटर नवलपरासी पश्चिम उक्त गणका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव रेग्मीले जानकारी दिए ।
नवलपरासी (पश्चिम) प्रहरीले १ थान पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने १ राउण्ड गोली सहित एक जना मानिसलाई भारतिय सिमावर्ती एरियाबाट पक्राउ गरेको छ । सुस्ता गाँउपालिका वडा नं. ५ रामनगर (४ नं. ठोक्कर) भारत तर्फबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको भारतिय नं. प्लेट यूपी ५७ एजेड ५०१९ नंम्बरको मोटरसाइकललाई रोकी चेकजाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकल चालक नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. ५ तरेनी बस्ने बर्ष २२ को सुनिल भेडियार पाललाई पक्राउ गरिएको हो ।
उनको साथबाट १ राउण्ड चेम्बर लोड भएको टाइप ५४ जस्तो देखिने म्याग्जिन सहितको पेस्तोल प्रहरी चौकी रामनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फेला पारेको हो । उक्त पेस्तोल, गोली र स पाललाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
एसएलसीको प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने डाक्टरहरु पक्राउ
काठमाडौं : एसएलसीको प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने डाक्टरहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययन गर्न जानको निमित्त एसएलसिको मार्कसिटमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता नपुगी नाम, जन्ममिति, प्राप्ताङ्क लगायतका विवरणहरु सच्याई सोही किर्ते मार्कसिटको आधारमा बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीबाट स्विकृति लिएका र हाल विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा न्यूरो हस्पिटल विराटनगरमा कार्यरत मोहमद सिद्दिक, जनकपुर चिल्ड्रेन हस्पिटल धनुषामा कार्यरत सुभाष प्रसाद साह, दिर्घायू गुरु हस्पिटल चावहिलमा कार्यरत मोहम्मद शाहिद राजा, चौरझारी मिसन हस्पिटल पश्चिम रुकुममा कार्यरत दिपेन्द्र गौतम, मोरङबाट अखिलेश कुमार देव, भक्तपुरबाट पल्लवी सिंह र ललितपुरबाट फराज हुसेन खाँ पक्राउ परेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख सहकुल बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
उनीहरुसँगै नक्कली प्रमाणपत्र बनाउन सघाउने बागबजारस्थित ज्योतिदिप इन्टरनेशनल कन्सलटेन्सीका सञ्चालक अरुण चौधरीलाई पनि प्रक्राउ गरिएको उनले बताए । प्रक्राउ परेकाहरुलाई सरकारी छाप किर्ते कसुरमा म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख थापाले बताए ।